Banyere Anyị - Shanghai H&H Hotmelt Adhesives Co., Ltd.
H&H profaịlụ ụlọ ọrụ
Jiangsu Hehe New Materials Co., Ltd. Shanghai Alaka bụ nzukọ guzobere na Shanghai dị ka ahịa isi ụlọ ọrụ nke Hehe New Materials, raara nye mmepe na mmezi nke zuru ụwa ọnụ ahịa netwọk nke Hehe ngwaahịa. Hedị "Hehe Hot gbazee nrapado" e jiri nlezianya wuo ma debe ya site n'aka ndị otu ahụ ihe karịrị afọ iri wee bụrụ akara nchara agbaze agbaze ọkụ nwere oke aha na ewu ewu na ụlọ ọrụ ahụ. O wuru ntọala na nhazi ihe karịrị 10,000 square mita na Jiangsu Qidong Binhai Industrial Park na Hehe; ọ nwere alaka ma ọ bụ na-ejide ụlọ ọrụ na Wenzhou, Hangzhou, Fujian na Guangdong iji nye nkwado maka ndị ahịa 'gbazee ngwa ngwa nrapado ngwa ngwa. Dika ulo oru ohuru di elu nke na ejiko R&D, mmeputa na ire ahia, na site na ichikota ihe ndi ozo R&D zuru oke na ihe ndi na agba oku, Hehe na-agbaso usoro mmepe ohuru nke ngwa ngbacha agba oku na uzo di iche iche ma meputa ihe puru iche na njirimara di nma. The akpụkpọ ahụ ngwa nnyocha na mmepe n'elu ikpo okwu kpụrụ a "anụ ụlọ na-eduga, mba mmekọrịta" technology ọhụrụ usoro tụnyere mmepụta, mmụta na nnyocha, na kemgbe na-ebute ụzọ nke ahịa na ngwa na mmụba nke na-ekpo ọkụ gbazee nrapado fim.
Anyị na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ngwaahịa ngwaahịa nwere a na-eduga ahịa ọnọdụ na ubi nke akpụkpọ ụkwụ ihe na-ekpo ọkụ mama bonding, electronic ihe, agha edo n'ichepụta, ji achọ ihe, na-abụghị marking uwe ime na ndị ọzọ na ubi, na-eje ozi a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke a maara nke ọma ụlọ na ndị mba ọzọ ụdị na ụdị ngwaahịa dị iche iche Ọ nwere ike dochie ngwaahịa ndị yiri ya. Enweela nnukwu ọganiihu na mmepe na ntinye nke edochi anya ọdịmma gburugburu ebe obibi, nke ga-eme ka mmetụta dị iche iche dị iche iche mejupụtara na ahụike na gburugburu ebe obibi ndị mmadụ.
Ihe anyị na-ere abụghị naanị ngwaahịa, kama iji mepụta uru na ọrụ ndị ọzọ maka ndị ahịa na ọha mmadụ.
Companylọ ọrụ ahụ agafeela SGS ISO9001 sistemụ njikwa usoro njikwa, ngwaahịa a agabigala asambodo nchekwa gburugburu ebe obibi. Hehe ndị mmadụ na-agbasoro na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "ahịa mbụ, dị ka na-eje ije na mkpa ice", na mmepe ozi nke"itinye na ịmepụta teknụzụ na-ekpo ọkụ iji mee ka ndụ dịkwuo mma na ka mma", na-agbanwe agbanwe mgbe niile ma na-eto eto, na -achọ njiri mara mma yana njikwa, will hehe branddị a na-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ akara ntụkwasị obi agbaze agbaze mba ụwa tụkwasịrị obi.